Ukuhlobisa indlu yomshado njengoba isiqinisekiso kwemizwa zemikhosi
Igumbi Elihle celebration wedding - lokhu ingenye izakhi eziyinhloko yomshado emnandi. Lapha akunandaba abayobe wahlanganyela nomklamo walo, inqobo nje umhlobiso wedding yomshado ngokuvumelana isitayela ulungisa kuya kumnandi futhi wanikeza ajabule. Phela, le ndawo bazoqhubeka kukhumbuleke iminyaka ukuza.
Ukuze ukhethe umhlobiso kwesokudla ihholo, kubalulekile ukuba sihlole amanye amaphuzu. Ngokwesibonelo, kubalulekile ukulinganisa ubungako emagcekeni, inani abamenyiwe, kanye okukhethwa kukho ilungiselelo amatafula. Lesi sakamuva kubaluleke kakhulu njengoba lokhu kuzoya futhi nibekezelelana Balloons nemaphosta. Ukuhlobisa indlu yomshado ngezandla zakho kungasindisa isamba esikhulu semali, ngaphandle-ke aphuphe up kancane wenze konke ngendlela ongathanda ngayo.
Nanka amathiphu ambalwa awusizo.
Ngalesi umkhosi hhayi angenza ngaphandle Balloons. Ukusebenzisa helium Balloons kungenziwa ulele futhi zihlobise ophahleni, kuphela kuze kudabuke umhlane of amabhola uyakwehla ukuba izivakashi, okuyiwona ungakwazi ukufinyelela kwesakho futhi zithathele ibhola uma kunesidingo. Arch of Balloons ungakwazi ukuhlobisa itafula abasebasha, amayunithi wezinhlamvu zabo eqondiswa efulemini yensimbi, okuyinto efakwe lapho abashadayo ngeke etafuleni kanye nofakazi. Uma ochwepheshe draw e Aerodesign, umcabango kuzolinganisela lapha kuphela indlela. Kunoma iyiphi inkampani ngeke anikele lokuzikhethela of umhlobiso kwehholo ngesimo imibala of Balloons, izinhliziyo, lamajuba, labantshintshi ukusetshenziswa ukumangala emhlabeni, okuyinto ngesikhathi esifanele aqhume futhi osypetsya ujabule isibili esitjhadileko bona siqalane confetti kanye zemali.
Ungasondela futhi hang amaphosta izifiso indoda nomfazi. Imisho kungenziwa igqoke njengoba uhlamvu yamahlaya, kanye siyakuhalalisela yangempela futhi ufisa ukuba azinike injabulo ekuphileni komkhaya.
Uma wayefisa, ingaphakathi ungakwazi ukwengeza izilungiselelo eziningana ukukhanya ophahleni hang ibhola ingilazi ibonisa ukuthi ukukhanya ukuhlobisa igumbi ne ama-solar.
Ukusebenzisa opholile vumela kahle ukuhlobisa titulo nematafula. Ungenza neminsalo amancane uyibeke zokudla kuhlanzekile yini nosihlalo izembozo.
Ukuhlobisa indlu yomshado kuqedile ngaphandle izimbali. Ngakho abasha ngokuvamile ehlotshiswe side ilungiselelo ezimibalabala, e ithoni isethi wakhe, futhi izimbali phezu amatafula izivakashi. Qaphela ukuthi uma lomshado izingoma ngezihloko ezihlukene akhethiwe ngokuhambisana isihloko imikhosi.
Njengoba sesiye muva imfashini kakhulu umhlobiso wedding ihholo izimbali uxoxe ngalokhu kabanzi. Ukuhlobisa izimbali ubukeka njalo umbukwane, abacebile ngesikhathi esifanayo romantic, izingoma ezahlukene izimbali, amakhambi izithelo ukuhlobisa lomshado kunoma iyiphi inkathi. Nokho, amanye amaphuzu Kusafanele kucatshangelwe.
Ngokwesibonelo, umshado izindikimba nezinkathi. Ngiyavuma, ukusetshenziswa ngezihloko ezihlukene entwasahlobo daffodils kanye iminduze esigodini, kodwa irises nojikanelanga umphelelisi ngokuphelele futhi ukuhlobisa imikhosi lomshado ehlobo. Endaweni ehlukile, kuyafaneleka tinhlelo tekufinyelela ebantfwini. basuke ngokuvamile kukholelwa ehlobo noma ekwindla, lapho isimo sezulu sivuma ukuba nina nichithe usuku lonke emgwaqweni. Kulokhu, izimbali uyothwala ibanga (ngokuvamile nomcimbi ngaphandle komuzi), ngakho-ke ukuze anqume kusengaphambili ukuthi nalabo izinhlobo izimbali, athwala uhambo olude. Ngokwesibonelo, ekwindla ungasebenzisa ngisho izipho lamasimu izingadi. Baskets ne apula elimnandi kanye amajikijolo umhlobiso egqamile futhi elimnandi wetende lomshado. Uma umshado kuhlelelwe ubusika, umhlobiso indlu yomshado azokusizana Ukwakheka nge Izigaxa fir kanye roses emibala, lapha ungakwazi futhi ufake sprig of mountain ash futhi viburnum.
Kasibili iliphi igumbi ungakwazi ukuhlobisa futhi wenze onesizotha, lokhu kuzosiza Yiqiniso, izimbali. Bangakwazi kuxhumene nemiklamo kanye indawo isitsha sezimbali phezu kwamatshe amazwi njengoba ibhekwa ungenza ubuhlalu lukathayela ukuthi hung ukuze umdweshu ezimibalabala noma wezimbali. Ngokukhethekile kufanele ikhokhwe abasha kanjalo, ngoba ngalolu suku they are undab 'uzekwayo, ngakho-ke kuyadingeka ukuba ukuhlobisa itafula licace. On the table ungafaka ilungiselelo imbali phezu kwendwangu hang kudabuke noma obhasikidi encane nezixha amakhambi noma izimbali. Ungenza inhliziyo ezimibalabala futhi hang phezu umakoti nomkhwenyana.
Ukuhlobisa indlu yomshado incike iso lakho lengqondo futhi kungenzeka ukuba uthole izinto ezidingekayo kanye nezinsiza. A lokusungula efanayo, ukuthi ihlobise ikamelo, imoto, kukhethwa isixha bakamakoti nokunye, kungenzeka ukuheha abamenyiwe, ngoba wonke umuntu uzothola umqondo yasekuqaleni futhi ezithakazelisayo ukuthi ufuna ukuqalisa ukusebenza.
Sine fun ngokugcwele. Scene ngosuku esenzeka ngalo le ndoda, kodwa hhayi omunye, kodwa ezintathu - ukufunda kanye nokuqalisa!
Lapho Halloween eRussia? Sifunda!
Usuku City of iVolga - iholide idolobha abasha
UBrahman - lena ... I Brahmins eNdiya
Story "amanzi Spring": Isifinyezo (Turgenev I. S.) iDemo umkhiqizo ukuhlaziywa
Ubuvila - kuba ... IzAga sobuvila
Inoveli Epic "Futhi epholile Flows Don": Isifinyezo by isahluko
Ukuthuthukiswa kweKotlovanov: Izindlela Eziyisisekelo
Ingabe Dzhon Ukusineka ngoba waziwa? "Catherine eziningi" - nesizathu esizwakalayo ukuhlola lokusungula nombhali!
Indlela ukususa Google Chrome kanye nomlando wayo
"Northern ePalmira" - double anesitezi isitimela: incazelo, izinkomba, ukubuyekezwa. Petersburg isitimela - Adler
Zohlobo inja kusukela movie "Christmas Tree 3": ezifuywayo ababukeli
Cholesterosis gallbladder: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa